En Ndipei zororo isu tinofarira cinema nemumhanzi, saka ndiwo matanho edu ekutanga ekucherechedza. Uye zvakare, isu tinobata nemhando dzese dzenguva uye neyakapfuura nguva, kubva kune yechinyakare yehondo cinema kusvika kune epamusorosoro magamba ekuratidzira mafirimu.
Mumunda wemimhanzi, tinoda jazi, flamenco uye punk mimhanzi. Iko kusanganisa, huh? Izvi zvinongogoneka nekuda kwedu yekunyora timu, iyo inowirirana zvakakwana kuita Dame Ocio nzvimbo yakazara-inotaura chiSpanish pane idzi misoro.
Sayenzi yekunyepedzera firimu
Concerts uye mitambo